Mey 2020 - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Isam-bolana: Enga anie 2020
Enga anie 30, 2020 0
Famerenana ny pedagogy ataontsika amin'ny fandehanana amin'ny lalana mankany amin'ny mahazatra vaovao
Enga anie 26, 2020 0
Ity Corona Connection dia mpiara-belona amin'ny fandefasana ny "Manifesto for a New Normality." Mifantoka amin'ny fahitana an'ity tontolo miova ity izay mampahafantatra ny Manifesto, Betty Reardon dia nanolo-kevitra ny handinihana sy hamerenana ny fanabeazana momba ny fandriam-pahalemana, mba hahafahan'ny sehatra manomana tsara ny olom-pirenena hihetsika amin'ity fotoana mahavariana ity. [tohizo ny famakiana…]
Antso ataon'ny vehivavy ho an'ny fiarovana ny olombelona, ​​fahasalamam-bahoaka, fandriam-pahalemana ary fampandrosoana maharitra
Enga anie 24, 2020 0
Antso nataon'ny vehivavy ho fahatsiarovana ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana sy ny tsy fandriam-pahalemana (24 Mey 2020) sy ny faha-75 taonan'ny Firenena Mikambana. [tohizo ny famakiana…]
Manifesto ho an'ny mahazatra vaovao
Enga anie 21, 2020 0
Amin'ity Connection Corona ity dia ampahafantarinay ny The Manifesto for a New Normality, fanentanana nataon'ny Latin American Council for Peace Research (CLAIP), izay ny tanjon'izy ireo dia ny famoahana hevitra marimaritra iraisana momba ny ara-dalàna alohan'ny areti-mandringana. Ity fampielezan-kevitra ity koa dia mikendry ny hampirisika ny fanoloran-tenan'ny olom-pirenena amin'ny fananganana fandraisana andraikitra ara-dalàna sy ara-dalàna vaovao amin'ny alàlan'ny fahatsiarovan-tena sy fandinihana miaraka.
Fifandonana Kashmir sy nofinofin'ny tanora
Ny fifandonana Kashmir telo taona lasa dia nandefa kitapo vatana an'arivony ho any am-pasana. Nanazava i Mukhtar Dar fa ny tsy fahampian'ny fahiratan-tsaina sy ny fampiasam-bola amin'ny fanabeazana dia nanjary tanora maro kokoa no nisafidy ny herisetra ho fomba fiaina iray. [tohizo ny famakiana…]
Enga anie 20, 2020 0
Ny World BEYOND War Peace Almanac dia mamela anao hahafantatra dingana lehibe, fandrosoana ary fihemorana amin'ny hetsika ho an'ny fandriam-pahalemana izay nitranga isaky ny taona. Raiso ny kopianao anio! [tohizo ny famakiana…]
Fampifandraisana mifandraika: Avy amin'ny adin-tsaina mihamitombo ho an'ny fanarenana miaraka
Enga anie 19, 2020 0
Ireo izay nanana traikefa teo aloha noho ny tahotra iraisana, indrindra ireo sisa tavela tamin'ny fandripahana tao Rwanda, dia mety hateraky ny krizy korona ankehitriny. Jean Pierre Ndagijimana dia manolotra valiny momba ny trauma momba ny fiatrehana ireo traikefa teo aloha tamin'ny tahotra iraisana amin'izao fotoana izao. [tohizo ny famakiana…]
Fampianarana an-tserasera 100+ maimaimpoana ho an'ny fandriam-pahalemana (sy ny fahamarinana) an-tserasera
Enga anie 15, 2020 0
Ity loharano tena tsara ity, natolotry ny mpanabe ny fandriam-pahalemana, Taylor O'Connor, dia misy loharanom-pahalalana momba ny teôria ho an'ny fandriam-pahalemana, ny programa ary ny fandaharam-pianarana ary ny fitaovam-piofanana nalamina lohahevitra. [tohizo ny famakiana…]
Fampianarana ho an'ny fandriam-pahalemana amin'ny tontolon'ny tahotra
Enga anie 14, 2020 0
Colins Imoh, mpanabe momba ny fandriam-pahalemana nizeriana, dia nieritreritra ny fomba sasany amin'ireo fotokevitra fototra amin'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana, eo amin'izy ireo, ny fitoviana, ny firaisan-kina ary ny fanjakan'izao rehetra izao, dia iharan'ny fanamby noho ny toe-javatra tsy mbola nisy toy izany tamin'ny areti-mandringana iray izay “atahorana amin'ny fiainany ara-bakiteny . ” [tohizo ny famakiana…]